Mayelana NATHI - Qingdao Xinmao ZT Steel Co., Ltd.
I-Qingdao Xinmao ZT Steel Construction Co., Ltd.yinkampani ephethwe ngokuphelele yiQingyun Xinmao Steel Structure Co., Ltd. eyasungulwa ngoJuni 2003 nendawo yefektri yama-sms angaphezu kuka-50,000. Le nkampani inabasebenzi abangama-486, onjiniyela abangama-40, okubalwa kubo nabasiki bengu-12, abawu-25 abasebenza ngobunjiniyela nobuchwepheshe.
Le nkampani ine ephelele uchungechunge zezimboni for ubunjiniyela Consulting, uhlelo okuklama, ukukhiqizwa ukucutshungulwa, ukwakhiwa, ukwamukelwa phrojekthi. Imikhiqizo kabanzi workshop, emafektri, iziteshi, 4S amahholo embukisweni nokunye. Imikhiqizo steel isakhiwo izakhiwo kanye esitsheni izindlu kahle eyatholwa amakhasimende ezifuywayo angaphandle, hhayi kuphela ethandwa yasekhaya bese zithunyelwa Bangladesh, Indonesia, Israyeli, Nigeria, Sri Lanka, ePhilippines, Mozambique kanye namanye amazwe kanye izifunda.
Ngokuhambisana nezidingo umkhiqizo ubuhle, inkampani yethulwa imigqa eziphambili ukukhiqizwa for ngokuqhubekayo emisha kanye zokuthuthukisa umkhiqizo. Njengamanje sinabafundi engaphezu kuka-10 ukukhiqiza imigqa, efana CNC ilangabi ukusika umugqa production,-C steel ukukhiqizwa umugqa,-H ugongolo iqembu, umnyango kwamanzi arc Welding umugqa production, ukukhiqizwa ipuleti Sandwich umugqa, sithwele umugqa ukukhiqizwa Plate njll
Sinamathela the professionalization imikhiqizo, ukukhiqizwa isikali large- kanye nokwethulwa ubuchwepheshe obusha. "Izinga ubuhle iphrojekthi kwemicabango ecophelelayo kwamakhasimende" ngeke ube yini umgomo wethu. Sethemba ukwakha ikusasa elingcono namakhasimende.